IAmazon ifuna ukuba uthenge amayeza akho | Iindaba zeGajethi
UJose Alfocea | | Amazon, Izaziso
I-United States lilizwe, elingcono okanye elibi, elinemicimbi eyahluke kakhulu kuthi. Enye yazo, kwaye enye ibisoloko ithathe ingqalelo yam xa ndiyibona kwimidlalo bhanyabhanya nakumdlalo kamabonakude (andikonwabanga ukuyindwendwela okwangoku) yinto enokwenzeka thenga amayeza athile kwiivenkile ezinkulu, njengalowo uhamba ayokuthenga itoti yetyhuna. Nangona kunjalo, ngoku iAmazon ifuna ukuya kwelinye inyathelo kwaye ibe luhlobo lwekhemesti ekwi-Intanethi.
Ewe kunjalo, njengoko isigebenga sentengiso siqale ukuthengisa iincwadi kwi-Intanethi kwaye ngoku sikwakuvumela ukuba ugcwalise inqwelo yakho yokuthenga iimveliso zokucoca kunye nokutya, izicwangciso zeAmazon ziyaqhubeka nokwandisa ishishini ukuze ikunike amayeza amiselweyo ngugqirha wakho.
IAmazon, ikhemesti elandelayo ekwi-intanethi?
Ke, ixesha linokuza xa, endaweni yokuhla siye ekhemisi, sinako uku-odola amayeza ethu amayeza eAmazon kunye nokutya, iimveliso zetekhnoloji kunye nezinye iimveliso ezivela kwizigaba ezahlukeneyo. Ngokutsho qi ni sekisa I-CNBC, isigebenga se-e-commerce sicinga ngokungena kwishishini lekhemesti. U-Eric French, intloko yesebe lezinto zokutya eAmazon, uxele ukunyusa ukuqeshwa kwabasebenzi beprojekthi ebizwa ngokuba "kukhathalelo lwempilo" kunyaka ophelileyo, ngelixa ebonisana "nabantu abaninzi."
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, i-CNBC ixele ukuba iAmazon iqashe uMark Lyons, ovela kwinkampani yeinshurensi yezempilo engenzi nzuzo I-Premera Blue Cross, ukwenza umphathi weenzuzo zekhemesti. Kwaye inokuba impumelelo yale projekthi imisela ukuba iAmazon iyaqhubeka okanye ayiqhubeki nezicwangciso zayo.
Kwaye nangona isigqibo sinokuza kwakamsinya kunokuba bekulindelwe, ukuhanjiswa kwamayeza ekhaya akunakuba kukusondela kangako kuba ifuna ukuba neengcali kuhanjiso lwamayeza. Ke, abanye abahlalutyi bathetha unyaka omnye okanye emibini ngaphambi kokuba inkampani ibhengeze umsebenzi wayo omtsha, onokuthi wenziwe ngokudibana nomhambisi weziyobisi. Kwaye e-United States kuba kwihlabathi liphela elinjengeSpain, manenekazi osokhemesti, ungazola kwaye silinde sihleli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » IAmazon ifuna ukuba uthenge amayeza akho
IAmazon = iSkynet